Wargeyska Washington Post oo shaaciyey xaqiiqda Qalbi-Dhagax iyo doorkii DF Somalia - Caasimada Online
Home Warar Wargeyska Washington Post oo shaaciyey xaqiiqda Qalbi-Dhagax iyo doorkii DF Somalia
Wargeyska Washington Post oo shaaciyey xaqiiqda Qalbi-Dhagax iyo doorkii DF Somalia
Washington DC (Caasimada Online) – Wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa maanta qoray in dowladda Ethiopia ay xaqiijisay in sarkaalka ONLF ee Cabdikariim Qalbi Dhagax uu iskiis isku soo dhiibay.
Hadalkan ayaa waafaqsan warbixinadii maal-mahan ay qoreysay Caasimada Online ee ahaa in dowladda Soomaaliya ay arrintan fududeysay oo kaliya oo aysan wax shaqo ah ku lahayn.
Warar gaar ah oo ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in Qalbi-Dhagax uu ka codsaday in dowladda Soomaaliya dhex-dhexaad ka noqoto is dhiibitaankiisa, si hadhow haddii ay Ethiopia heshiisyada ay galeen ay uga baxdo, ay dowladda Soomaaliya arrintan ula socoto.
“Haddii Cabdikariim iyo Ethiopia heshiiyeen, taas dowladda Soomaaliya waxba kama qaban karto” waxaa sidaas yiri ilo-wareedyo ka tirsan dowladda.
Dadka Soomaalida ah ee arrintan ka carrooday waxaa wanaagsan inay hubiyaan xaqiiqda, oo aysan la jaan-qaadin dadka ka shaqeynaya burburka dowladda Soomaaliya ee ka faa’iideysanaya arrintan.
Halkan hoose ka aqri Warbixinta wargeyska Washington Post.